Cilmi iyo Calaf - Boga Wise Man
Cilmi iyo Calaf
April 26, 2020 qawdhan
Waxa uu fadhiyey maqaaxi bunka laga cabo habeenkii oo dhalinyaradu ku caweyso.
Waxa u yaalay shaqooyin badan balse waa uu caajisay. Isagoon cidna u sheegin ayuu yimid kobtan uu fadhiyo. Si uu maskaxda u nasiyo waxa uu soo qaatay buug sheeko ah.
Coffee ayuu dalbaday. Kursiga ayuu dib ugu fadhiistay. Maskaxdiisa ayuu kadib ka debciyey xakamihii uu ku hayay. Waxaanu bilaabay inuu daawado dadkii fadhiyey maqaaxida.
Isla markii uu dareemay in culays ka degay ayaa waxa soo galay laba hablood oo si fiican u lebisan.
Waxa uu caado u lahaa in uu qiimeyn hoos ahaana ku sameeyo markuu gabadh qurxoon arko. Waxa uu isku dayi jiray inuu maleeyo dabeecadeeda, heerkeeda waxbarasho, inay xaas tahay iyo inkale, ujeedada ay u socoto IWM.
Intuu eegay dhinacii labada hablood ayuu is yidhi qiimee. Balse waxa kacday mid kamida hablihii si ay dalabka u gudbiso.
Intii ay sii socotay ayuu isha lasii raacay. Markuu kasoo jeestay mise saaxibadeed ayaa eegaysa.
” Maxaad saaxiibaday ka eegaysaa?” ayay su’aashay.
” Waan qiimeynayay” ayuu ku jawaabay.
“Yaa kuu dirsaday qiimeynteeda” ayay ku tiraabtay.
“Adigaba waan ku qiimeeyey laakiin kuu sheegi maayo illaa…” ayuu ugu jawaabay.
” Illaa hee dhamaystir ha baqane ninbaad tahee”
Intuu qoslay ayuu ku yidhi ” illaa aad soo kacdo oo miiskaygan soo fadhiisato”
Intay qososhay ayay madaxa luxday. Intuu dhoola cadeeyey ayuu buugiisa isaga jeestay.
Cabbaar ka bacdi mise waa labadii hablood oo dul taagan.
” Hala gabdho soo fadhiista. Waryaa Cabdi Yare usoo qaad gabdhaha bunkooda”
Inantii ay hadalada is dhaafsadeen ayaa u jawaabtay ” waanu dhamaysanay, waanu baxaynaa ee noo sheeg qiimayntayadii”
” Hadaydaan fadhiisanayn midkiin uunbaan qiimeynteeda u sheegayaa isy deysta”
Intay is eegeen ayay qosqosleen.
Hadalkii ayuu sii watay.
” Ama aan labadiinaba idiin sheego oo fadhiista bun kalana caba”
Inantii kacday aya hadashay ” Walaalo meel baanu ku degdegaynaa ee iyada sii qiimeynteeda anigu ma rabee”
Haye intuu ku yidhi ayuu hadalkii u bilaabay.
” Markaad soo gasheenba waxaan eegay labadiina ta hadlaysa iyo ta wax dhegaysanaysa.”
Intuu tilmaamay inantii qiimeynta rabtay ayuu yidhi ” Adaa hadlayay. Inanta kalana way ku dhegaysanaysay. Taasi oo muujisay inaad cabanayso. Markay dalabka doontayna waxaan ka fahmay inay tahay qof adeeg badan ama xaas. Sidaad ugu waramaysayna waxa ka muuqatay kalsooni iyo daacadnimo taasoo oo dadka saaxiibada ahi uun wadaagi karaan. Lebiskaaga ayaan eegay. Kabo isboorto ah, faro aan xine iyo cidiyo dhaadheer lahayn, muraayado indhood. Waxa ii soo baxay inaad dhawr bilood fikiraysay. Ama imtixaano ayaad ku jirtaa ama jacayl baa kala kacay. Wakhtigii imtixaanka lama gaadhin kolkaa waa jacayl. Kadib ayaan is weydiiyey hadaad la hadasho illaa halkeed isla gaadhi kartaan?”
Shaahiisii ayuu kabaday. Weli gabdhihii way dul taagan yihiin walaw ay labadoodiiba yaabeen.
” Hadaan kula hadlo hore iilamaad hadasheen laakiin saaxiibadaa ayaan la hadli lahaa iyadaan odhan lahayd anuu xaas baan ahee inantan la hadal si aykuu ilowsiiso hawlaha kugu furan. Waad iga yara kici lahaydeen idinkoo musqusha tegaya. Kadibna ninkan sii telka ayay ku odhan lahayd aad jacaylkaagii hire ilowdide. Isla habeenimadaba sheekadayda macaankeeda kamaad seexateen. Laba habeen markaynu wada hadalnana waxaa kaa yaabin lahaa markuu jacaylkaagii maskaxdaada kusoo dhici waayo. Laba bilood markaynu wada socono ayaad i odhan lahayd xagaynu u soconaa markaasaan ana ku block gareyn lahaa”
Intay qosol darteed ilmaysay ayay tidhi ” Hoo qoro numberkayga”
Inantii la qiimeeyey markay numberkii u qortay wiilkii ayay fadhiisatay.
Saaxiibadeedna indhaha ayay kala hadashay. Iyadiina way fadhiisatay.
Inankii wuu yaabay.
Hadalkii ayay u bilowday.
” Wiilow hambalyo. Waad indho furantahay. Haday xataa dhabtahay in sifooyinka aad igu tilmaantay oo dhami run noqoto waxaanad wax ka sheegi karahayn caqligayga iyo hamigayga.”
Intuu inankii dhoola cadeeyey ayuu hore usoo fadhiistay oo miiskii suxulada saaray isagoo is leh waad kululaysay.
Way sii waday hadalkii.
” Intaanan tayda kaaga waramin sidaad ii faduulisay aan kuu faduuliyo. Aan adiga ku eego. Ugu horeyn waxaad tahay nin wax akhriya balse caajisa. Jidhkaagu ma dhisna taasina waxay i tusaysaa in aanad gym-ka joogtaynin. Hadalkaaga waxaan ka dhadhansaday inaad tahay doob da’daaduna waxaan ku qiyaasay inaad 35 sano ka weyn tahay. Imisa jirbaad tahay? Mase guursatay?”
Isagoo wejigiisii yara ururay ayuu ugu jawaabay ” waxaan ahay 38 waana run weli ma guursan ma dembibaa?”
Way dhoola cadeysay hadalkiina way qaadatay markale.
” Waxbaad akhriyaysaa. Koley waxbadan oo wadanka ka jira waad saluugtaa. Gabdho badan oo aad guursan karaysayna waad saluugtay. Waayo inta dhiman ayaad waxkasta ka aragtaa adna waxkama qabatid. Waxaad u egtahay inaad jeceshay inaad wax indhodheyso balse aduu waxba masoo kordhisid.”
Ninkii inta uu yara gubtay ” Ayuu ku yidhi maxaad ka ogtay waxaan soo kordhiyey?”
” Hadaad nin wax soo kordhiyey tahay jacayl iga khasaaray intaad iga dareentay igumaad wiirsateen. Waana runtaa oo midbaan is fahmi weynay sidaada maskax badnaa balse igu yuus batay. Sababtoo ah wuxuu ogaaday inaan ka caqli iyo hami sareeyo. “
Ninkii indhahaa soo baxay. Wuu aamusay hadalkiina kamuu dhex gelin.
Way u dhoola cadeysay.
” Ha yabaalin. Imisa gabdhood ayaad fasaxday adoo isleh midkasta mid ka fiican ayaad helaysaa. Imisa fikradood ayaad qori weyday wahsi dartii. Imisa dhaliilood ayaad xalkeeda keeni karaysay balse aad sheegtay si aad dadka isu tusto uun. Waad maskax badantay balse waxaan is cajibin ahayn mooyee maxay kale ..?”
Wuu cadhooday. Marna wuu qoslay. Marna wuu yaxyxay. Ugu dambayntii waxa uu is yidhi yaanay ku dhaafin.
Intuu qoslay ayuu ku yidhi ” Aakhirkii waynu kulanay in badan ayaan ku raadinayee”
Waxay ugu jawaabtay ” Maan fahmin!” Intay madaxa qaloocisay.
” Qof sidaada ah ayaan raadinayay. Waxaad sheegtay oo dhami waa run. Balse qof sidaada ii fahma ayaan intaasba raadinayay. Alxamdulillah caawana ku helay”
Qosol ayay is qaban weyday.
Jacaylkoodiina aakhirkii wuu guulaystay.
Sheekadan magac usoo bixiya.
Calaf CILMI Guur Haasaawe kaftan Kulan Nolol Sheeko Somalia Somaliland
Previous Post Dhaqaale Aqoon Ku Dhisan
Next Post Somaliland Dagaal Hoose Ayaa Kusocda
Xusuus Qorkii Maxamed S Gees - Sanadihii Cadhada 25